Home News MW Farmaajo oo la wareegay howlaha aminga Caasimadda iyo Ciidamo Milateri oo...
MW Farmaajo oo la wareegay howlaha aminga Caasimadda iyo Ciidamo Milateri oo lagu wareejiyay ammaanka Muqdisho
Warara lagu kalsoon yahay oo soo gaaray warsidaha MOL ayaa sheegaya in Ciidamada Xasilinta ee sugayay ammaanka Caasimadda gabi ahaanba la xareeyay, kuwaasoo la isugu geeyay xarunta Xisbiga oo talis u ahaa. MW Farmaajo ayaa sida uu balan qaaday uu howsha mas’uuliyadda amniga Caasimadda laga wareejiyay Ciidanka Xasilinta. Ciidamada lagu wareejiyay ammaanka Muqdisho ayaa lagu magacaabaa Guutada 14-ka October, kuwaasoo la sameeyay kaddib qaraxii Zoobe ee dhacay 14-kii bisha October ee sanadkii hore.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamadan ay yeelan doonaan talis gaar ah, waxaana tan iyo shalay Ciidamadan si tartiib ah ula wareegayaan amniga baraha ciidan, waxaana lagu wareejiyay Koontaroolada laga soo galo magaalada Muqdisho sida Ex Koontarool Afgooye, Maslax iyo Galgalato.
Sidoo kale waxaa lagu wadaa in maanta Ciidamadan lagu wareejiyo Isgoysyada waddooyinka magaalada Muqdisho ee ay horay u joogeen Ciidamada Xasilinta.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in markii hore ay Madaxda dowladda isku maandhaafeen howlaha sugida amniga Caasimadda oo ahaa mid ka dhashay cabashooyin badan oo la xiriira in xirnaanshaha waddooyinka oo lagu gooyay dhagxaan iyo carro.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hey’adaha ammaanka Caasimadda ku amray inay is bedel ku sameeyaan istiraatiijiyada amniga Caasimadda, isagoo kulamo la lahaa saraakiisha iyo hoggaanada ciidanka.
Previous articleXOG:Khilaaaf Xoogan Oo soo kala dhexgalay MW Farmaajo iyo Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka
Next articleWAR DEG DEG: Gen. Gorod Taliyaha CXD Oo Xilka qaadis lagu Sameeyay&Shaqsiga lagu badalay Oo shaaca laga qaaday
Sargaal ka Tirsan Al-shabaab oo gacanta lagu dhigay